France: Annaga ayaa Mareykanka u sheegnay gaariga iyo halka uu marayay Abuu Zubeyr – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Sirdoonka dalka Faransiiska ayaa qeyb weyn ka qaatay dilkii Mareykanku hogaamihii Alshabaab, Axmed Cabdi Godane oo loo yaqaanay Abuu Zubery 1-dii bishaan September ugu geystay gobolka Shabeellaha Hoose ee dalka Soomaaliya, sidaas waxaa shalay oo sabti ah daabacday majaladda todobaadlaha ah ee kazoo baxda Faransiiska ee Le Point.
“France iyo madaxweyne Francois Hollande waxey taageereen, waxna ka qorsheeyeen howlgalkii sirdoon ee lagu dilay hogaamiyihii Alshabaab ee ay geysteen diyaaradaha dagaalka Mareykanka” ayay qortay majaladda Le Point magazine.
“Macluumaad muhiim ah oo la xiriira howlgalkaas, gaar ahaan nuuca gaarigii uu watay Godane iyo wadadii uu marayey ayaa loo diray wasaaradda gaashaandhiga Mareykanka ee Pentagon” ayay yiri majalada Le Point oo soo xiganeysa waaxda arrimaha debadda ee sirdoonka Faransiiska.
Faransiiska ayaa hogaamiyihii Alshabaab ee la dilay u heystay inuu ka dambeeyey afduubka labo sarkaal oo ka tirsanaan sirdoonka dalkaas, oo sanadkii 2009 laga afduubay Muqdisho.
Mid ka mid ah labadaas sarkaal waa la sii daayey, kan labaad oo ahaa Denis Allex, waxaa lagu dilay howlgal milateri oo fashilmay oo Faransiisku ku qaaday deegaanka Buulo Mareer bishii January ee sanadkii hore ee 2013.
Mareykanka ayaa hogaamiyaha Alshabaab iyo labo kale 1-dii September ku dilay gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana Alshabaab dilkaas shaaciyeen 6-dii isla bishaan, iyagoo magacaabaya hogaamiye cusub oo laguy magacaabo Axmed Cumar Abu Cubeydah.
Alshabaab ayaa ku hanajabay iney u aargudi doonaan hogaamiyahoodii la dilay, waxaana durba shalay dalka Uganda laga sheegay iney halkaas ku sugan yihiin unug ka tirsan ururkaas oo doonaya iney weeraro fuliyaan.
Hailemariam Desalegn: Dilka Amiirkiii Alshabaab wuxuu guul yahay dalalka gobolka